Nehurombo, zvishandiso zveShopify zviri kushomeka pano. Shopify ine kugona kugadzirisa kumwe kwekutenga ngoro yekusiya uye mamwe maemail - asi hapana chaiko huchenjeri kana kuzivisa zvine simba zvakavakomberedza. Semuenzaniso, ini ndakanga ndisina nzira yekuparadzanisa uye kutumira zvinopihwa zvichibva pane nhoroondo yekutenga kana zvimwe zvevatengi hunhu.
Mushure mekuita imwe ongororo pamhepo, ndakafunga kuyedza Klaviyo. Mukati meawa, ini ndakachinja yavo yakajairwa kushambadzira otomatiki kuyerera kuti vatambire vatengi vatsva, mabhurawuza akasiiwa asina kuwedzera zvinhu kungoro, akasiya vatengi vengoro yekutengera, winback yevatengi, uye cross-sell / upsell automation yakagadzirirwa uye kutumira.
Klaviyo kusangana pamwe ne Shopify inoshamisa. Yakakwanisa kubatana neShopify uye kugaya rese data revatengi, uye nekukasira kuitisa kwakawanda kwakakwenenzverwa kuyerera. Mumwedzi wekutanga, kutaurirana kwandakagadzira nekuvaka ndichishandisa dhonza & kudonhedza email edita (Shopify haina imwe) yakamutsira dzoka mukudyara kwe2286% yemutengo weiyo system. Kwete… handisi kutamba ikoko.